स्याउ खान मन लागेर अनलाईनमा पैसा तिरेको आइपुग्यो आइफोन ! - Samachar Post Dainik
स्याउ खान मन लागेर अनलाईनमा पैसा तिरेको आइपुग्यो आइफोन !
काठमाडौं धेरै मानिसहरुको चाहना हुन्छ आइफोन बोक्ने। तर त्यसको लागि बचत जरुरी छ किनभने आइफोन महँगो हुन्छ। तर बेलायतमा एक व्यक्ति भने भाग्यशाली सावित भए।
उनले अनलाईनमा स्याउ खान मन लागेर स्याउको लागि डिजिटल पेमेन्ट गरेका थिए तर जब उनको घरमा आइफोन आइपुग्यो उनी तीनछक्क परे। ट्विकेनह्यामका निक जेम्स
खाद्य सामग्री बोक्ने झोलामा नयाँ आइफोन देखेपछि अलमल्लमा परेका थिए। द मिररका अनुसार ५० वर्षका जेम्सले टेस्कोबाट स्याउ मगाएका थिए। झुक्किएर भने उनलाई आइफोन दिइएको थिएन।
उनलाई आइफोन एसइ उपहार स्वरुप दिइएको रहेछ। टेस्कोले आफ्ना ग्राहकको लागि आइफोन, एयरपोड तथा समसुङका उत्पादनहरु उपाहार स्वरुप दिँदा जेम्स आइफोन पाउने भाग्यशाली ग्राहक बनेका हुन्।
वैशाख, नवलपुर । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दाउन्नेमा बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा घाइते भएकामध्ये दुई महिला र एक पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
दुर्घटनामा घाइते भएका ३१ यात्रुमध्ये तीन जनाको गएराति उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
घाइतेहरुको भरतपुर तथा नवलपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बुटवलबाट नारायणगढका लागि छुटेको ना ५ ख ७००० नम्बरको बस शनिबार साँझ आफैं अनियन्त्रित भई दाउन्नेमा दुर्घटना भएको थियो । सडकबाट तल भीरमा बस खसेकाले घाइतेको उद्धारमा
समेत कठिनाइ भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्किबासको टोलीले घाइतेको उद्धार गरेका थिए ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
प्रकाशित मिति ६ बैशाख २०७८, सोमबार ०४:४०